Madaxweyne Siilaanyo Oo Isku Bedel Ku Sameeyay Gudoomiyayasha Gobolada Dalka | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Isku Bedel Ku Sameeyay Gudoomiyayasha Gobolada Dalka
Hargeysa(ANN)Madaxweyne Siilaanyo ayaa isku bedel ku sameeyay gudoomiyayaasha Lixda gobol ee waaweyn marka laga reebo gudoomiyaha gobolka Saaxil. sidoo kale wuxuu isku shaandhayntaa ku daray shan ka mid ah goboladii uu hore u magcaabay
Madaxweynihii hore ee Daahir Rayaale, kuwaas oo aan weli sharciyadooda la meel marin.
Qoraal saxaafadeed kasoo baxay caawa caweyskii qasriga Madaxtooyada oo uu ku saxeexanyahay Afhayeenka Madaxtooyada Axmed Saleebaan Dhuxul, waxa kaloo lagu sheegay in xilkii laga qaaday Gudoomiyihii gobolka Awdal.
Qoraalka kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha ee isku bedelka gudoomiyaaysha ayaa nuxur ahaan u dhignaa sidan:- “Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa uu xeer madaxweyne oo sumadiisu tahay JSL/M/XERM/249-1568/022013 uu isku bedel ku sameeyey Badhasaabada Dalka qaar ka mida.
Madaxweynuhu Markuu Arkay: Qodobka 90aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland; Markuu Arkay: Qodobka 110aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland; Markuu Tixgeliyay: Ahmiyadda ay Gudoomiyeyaasha Gobolladu u leeyihiin dhismaha Qaranka;
3. In Mudane, Maxamed Faarax Aadan, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Sool ee Jamhuuriyadda Somaliland.
4. In Mudane, Cabdoo Axmed Aayar, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Awdal ee Jamhuuriyadda Somaliland. ( horena u ahaa Gudoomiyaha Gobolka Togdheer ee JSL)
Madaxweynuhu waxa uu Xilkii Gudoomiye nimo ka qaaday Gudoomiyihii Gobolka Awdal Mudane, Axmed Xadi Sidci oo uu madaxweynuhu uga mahadnaqay mudadii uu xilkan qaranka soo waday haatana uu xilka ku wareejiyo Gudoomiyahan Cusub.” ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Somaliland. balse lagu xusin war saxaafadeedka Badhasaabka gobolka Sanaag oo xilkii laga qaaday.